Makhaayadda Udon Iyo Dukaanku
Axad 7 Bisha Saddexaad 2021
Makhaayadda Udon Iyo Dukaanku Sidee naqshaddu u matalaysaa fikirka cunnada? The Edge of Wood wuxuu isku dayaa inuu ka jawaabo su'aashan. Inami Koro waxay dib ula soo bixineysaa saxanka dhaqameed ee reer Japan ee Udon halka ay ku hayaan farsamooyinka caadiga ah ee diyaarinta. Dhismaha cusub wuxuu ka tarjumayaa sida ay u wajahayaan iyaga oo dib u fiirinaya dhismayaashii alwaaxida ahaa ee reer Japan. Dhamaan khadadka qumbaha ee muujinaya qaabka dhismaha ayaa la fududeeyay. Tan waxaa ka mid ah galaaska galaaska ah ee ku qarsoon gudaha tiirarka alwaaxda khafiifka ah, saqafka saqafka iyo saqafka sare ee wareegsan, iyo cidhifyada darbiyada toosan ayaa dhammaantood lagu muujiyaa hal sadar.
Sabti 6 Bisha Saddexaad 2021
Farmashiyuhu Jarista Edge waa farmashiye faafinaya oo laxiriira Isbitaalka Guud ee Daiichi ee dariska la ah Magaalada Himeji, Japan. Farmasiiyada noocan ah macmiilku si toos ah ugama helo alaabooyinka sida nooca tafaariiqda ah; halkii daawooyinkiisa ay ka diyaarin doonaan farmashiistaha gadaashiisa gadaashiisa kadib markay soo bandhigaan rijeeto caafimaad. Dhismaha cusub ayaa loogu talagalay in lagu horumariyo muuqaalka cisbitaalka iyada oo la soo bandhigayo sawir farsamo gacmeed sare leh iyadoo la raacayo tikniyoolajiyad caafimaad oo sareysa. Waxay ku soo baxaysaa waxoogaa yar oo cad laakiin si buuxda u shaqeynaya.
Jimco 5 Bisha Saddexaad 2021
Makhaayadda Shiinaha Cusboonaysiinta cusub ee maqaayadda Pekin-kaku waxay siisaa dib-u-fasiraad dhab ah oo ku saabsan waxa makhaayad qaab dhismeedka Beijing uu u ahaan karo, iyada oo la diiday naqshaddii soo jireenka ahayd ee quruxda badneyd ee door bidday qaab dhismeedka qaab fudud oo fudud. Saqafka waxaa ku jira Cas-Aurora oo la abuuray iyada oo la adeegsanayo daahyo dhererkiisu yahay 80 mitir oo daahyo ah, iyada oo darbiyada lagu daaweynayo lebenkii madoobaa ee Shanghai. Waxyaabaha dhaqanka ah ee ka soo jeeda milkiilaha Shiinaha ee millaneerka ah oo ay ku jiraan dagaalyahannada Terracotta, casaanka cas, iyo dhoobada Shiinaha ayaa lagu muujiyey muuqaal yar oo muujinaya qaab isbarbar dhigaya walxaha qurxinta.
Khamiis 4 Bisha Saddexaad 2021
Makhaayadda Jasiiradda Dib u dejinta Moritomi, oo ah maqaayad laga cuno cuntada reer Japan, oo ku xigta hidaha adduunka Himeji Castle wuxuu sahmiyaa cilaaqaadka ka dhexeeya jidh ahaanta, qaabka iyo tarjumaadda qaab dhismeedka dhaqameed. Meesha cusubi waxay isku dayeysaa inay soo saarto qaab dhismeedka qalcadda qalcadda ee agabyo kala duwan oo ay ku jiraan dhagaxyo xariif ah iyo midab leh, bir dahaar ah, iyo bir daasadeed. Dabaq ka samaysan dhagaxyo yar yar oo iskuxiran Laba midab, caddaan iyo madow, ayaa u qulqulaya sida biyaha oo kale, waxayna ka talaabayaan alwaax alwaax alwaax ah oo lagu qurxiyey albaab laga soo galo, hoolka soo dhaweynta.
Talaado 2 Bisha Saddexaad 2021
Makhaayadda Udon Iyo Dukaanku Farmashiyuhu Makhaayadda Shiinaha Makhaayadda Jasiiradda Degenaanshaha Qoysku Booska Farshaxanku